6 arrrimood oo ay Shiinaha ku aargoosan karaan dagaalka ganacsiga - BBC News Somali
Madaxwaynaha Shiinaha iyo dhigiisa Mareykanka
Inkastoo ganacsiga u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka uu yahay mid aan isu dheelitirnayn oo uu Shiinahu ka badan yahay ayaa haddana waxaa jira faa'dooyiin kale oo ay Mareykanka Shiinaha ka helaan.
Waxaa ka mid ah faa'idooyinkaasi lacagaha Mareykanka uga soo xarooda dalxiisayaasha Shiinaha ee Mareykanka booqda.
"Tallaabooyiinkan dhibaato ayay u gaysanayaan dadka Shiinaha ayuu yiri," ayuu yiri Mr Hufbauer s.
"Waxaa jira rabitaan fursad lagu siinayo in qiimaha lacagta ay hoos u dhacdo si loo yareeyo saamaynta ay canshuurta badan yeelan karto," ayuu yiri Mr Evans-Pritchard oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha ah.
Waxa uu dhawaan bartiisa Tweetar-ka ku qoray madaxwayne Trump in uu ku kalsoon yahay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu fulin doono heshiiskii ay gaareen ,balse waxa uu intaa ku daray in "Shiinaha laga yaabo in ay cadaadis saaraan heshiiska iyaga oo eegaya danahooda ganacsiga".
"Waa kaarkan midka ay si sahlan u ciyaari karto dowladda Shiinaha taasi oo ah in ay u baaqaan Kuuriyada Waqooyi in ay bilaabaan wax sababi kara caqabad , ayuu yiri Mr Hufbauer.
Mr Evans-Pritchard ayaa yiri "khiyaarka ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo canshuuraha lagu soo rogay waa in ay dhaqaalaha kobciyaan.